November 2009 – Everybody Read TChen
ကျမက စာအုပ်တအုပ်ကို ဖတ်နေအတွက်…
သူ့သားကို အချက်ပေးလိုက်တဲ့ တဏှာဆန်ဆန်
သူ့ ဆယ်ကျော်သက် သားနဲ့ ရင်းနှီးအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ
and the man thinks I cannot see
the wrinkled posture of his son
as he is nudged.
He thinks I cannot sense
four eyes upon my flesh,
as the father tries to bond with his teenage boy
by ogling my breasts.
Posted on November 22, 2009 February 7, 2018 Categories jewel's ကဗျာများ, Uncategorized, Uncategorized2 Comments on နေစာလှုံခြင်း
Posted on November 22, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ1 Comment on ည နဲ့ ဘဝ
၁၁ ၄ ပိုင်း ၃ ပိုင်း ဒီဂရီ
ပြီးတော့ အရာရာ ကို
တောင်တန်း၊ တောင်ကုန်း၊ တောင်ကြားနဲ့
ဘာမြူဒါ တို့ တွင်းနက်ကြီးတို့ထက်
ငါ့ရဲ့ ရှိူက်ဖိုကြီးငယ် အသွယ်သွယ်ကလဲ
၉ ဒဿမကျော်ကျော်ရှိတဲ့ ငလျင်ကြောင့်
၀၁ ရက် ၀၁ လ ၀၀၀၁ ခုနှစ်ကနေ
Posted on November 19, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ10 Comments on ငါ့ရဲ့ ၂၀၁၂
ကဲ ကဲ ကဲ
ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း မွေးနေ့မှာ ချက်ကျွေးတဲ့ ကြာဇံချက်ပါ အရပ်ကတို့
ပထမဆုံးပြောချင်တာက ဒီနှစ်မွေးနေ့ က ၂၈ နှစ်မြောက်ပါ အဲ့တော့ ၄ နှစ်တခါ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၇ နှစ် ၄ လီ နှစ်ဆယ့်ရှစ်ပါ အဲ့တော့ ဘာဖြစ်သလဲ ဘာမဖြစ်ပါဘူး မွေးနေ့မွေးရက်ကိုက်တာပေါ့နော့ တနင်္ဂနွေသားလေးပါတော်
ကောဇာသက္ကရာဇ် နဂါးခေါင်း မြောက်ဘက်လှည့်တဲ့အချိန်မှာမွေးတဲ့ ဘင်္ဂါဘွား (ဖင်ကဖွား)တနင်္ဂနွေသားနေတက်ရေတက် လေဂျင်တက် (အေ့……) အဲလေ ဆရာသော်တာဆွေ နဲ့ရောသွားပြီ
ဒုတိယအနေနဲ့ပြောချင်တာက မျက်နှာစာ စာမျက်နှာကနေ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့လူတွေ အီးမေးလ်ကနေ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့လူတွေ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အီးမေးလ်ကနေ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ထဲက တီ့အကြိုက်ဆုံးက အမ တယောက်ရဲ့ဆုတောင်းပါ ဒီမှာဖတ်ကြည့်ကြပါအုံး တီ ကြိုက်လို့ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ် ကူးထားလို့လဲရတယ် နောက်တခြားလူကို ရေးပေးလို့ရတာပေါ့
Happy Birthday, my dear BIS!InboxXHey,I know it’saday early but as I will not be able to use internet tomorrow (Sunday), I wanted to make sure that you get your wish from me.So,where do I start? I don’t want the usual “many happy returns blah blah blah”. They sound so inadequate compared to what I want to say. First off, I thank your parents for giving birth to you on this special day. Second off, I thank my luck that I get to meet you and we become close friends. Third off, I thank you for all your support and friendship through good and bad times. Lastly, let’s continue to take care of each other whatever the futurebrings and we will still be together (at least in spirits, if not indistance) for many years to come.
Love and kisses, mkxoxoxoxoxoxoxကဲအဲ့တော့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ကြာဇံချက် ချက်ကျွေးတာပါ
တီ့ဘလောခ့် ချစ်သူတွေ အားလုံး၊ လာလည်နေကြလူတွေအားလုံးကိုလဲ ဖိတ်ကျွေးပါတယ်နော်
ပထမဆုံး ကြက်ပေါင် (ကြက်တကောင်လုံးရဲ့လေးပုံတပုံ)ကို ကြက်သွန်ဖြူနီ တွေနဲ့ပြုတ်ပါမယ် အသားရည်တွေချိုလာတဲ့အထိ ပြုတ်ပေးပါ ဆားအချိုမှုန့် သင့်ရုံထည့်လို့ရပါတယ် ပြီးတော့ ဆူပြီး အသားရည်ချိုလာပြီဆိုရင် ခဏအိုးကိုချထားပြီး ပေါင် ကို အသားနွှင်ပါမယ် အောက်မှာပြထာတဲ့အတိုင်းပါနော်
အသားနွှင်ပြီး ကျန်နေတဲ့အရိုးကိုတော့ ဟင်းရည်ပိုချိုအောင် ပြန်ထည့်ပြုတ်ပေးပါ။
နောက်တဆင့်ကတော့ ကြာဇံဟင်းထဲထည့်မယ့် အစာပလာ အကုန်လုံးကို ဒီလိုလေးတင်ကြိုရေစိမ်ထားပါမယ်
ဘယ်ဘက်က ပုံကတော့ ပန်းခြောက်နဲ့ ပဲပြားခြောက်ပါ ညာဘက်ကပုံကတော့ ကြွက်နားရွက် လို့ တချို့ က ခေါ်တဲ့ မှိုခြောက်ပါ ရေစိမ်ထားပါမယ်
အောက်ကပုံကတော့ ကြာဇံပါ ရေစိမ်ထားပါမယ် တပြိုင်တည်းမှာပဲ ကပ်ကြေးလေးနဲ့ ညှပ်ထားပေးပါ မဟုတ်ရင် အရှည်ကြီးဖြစ်နေပါမယ် အဲ့တာကြောင့် ကပ်ကြေးလေးနဲ့ ကိုက်ထားပေးရင် အဆင်ပြေပါမယ်
နောက်အဆင့်အနေနဲ့ကတော့ ခုနက ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲမှာ ရေစိမ်ထားတဲ့ ပန်းခြောက်နဲ့ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ပဲပြားခြောက် မှိုခြောက်စတာတွေကိုထည့်ပြီး ဆူအောင်ထပ်တည်ပေးပါမယ်
ပြီးရင်တော့ ကြဇံချက်လေး အရောင်လှဖို့အတွက် အရောင်တင်ဆီမှုန့်ကို ဆီသတ်ရပါမယ်
ဆီပူအိုးလေးတည်ပြီး အရောင်တင်ဆီမှုန့်ကိုထည့်လိုက်ပါ ခဏလေးဆိုရင် ရပါပြီ
ပြီးရင်တော့ အဲ့ဒီဆီသတ်ထားတဲ့ အရောင်တင်ဆီကို ခုန က တခါ ပြန်ဆူအောင်တည်ထားတဲ့ အသားပြုတ်အိုးထဲထည့်ပါ ပြီးရင် ခုနက ရေစိမ်ထားတဲ့ ကြာဇံတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ် ကြာဇံထည့်လိုက်ရင် ရေတွေက ခဏအေးသွားတဲ့အတွက် ပြန်ဆူအောင်တည်ရပါမယ်
နောက် ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ကြိုက်တတ်ရင် ထည့်ပါ တီကတော့ ကြိုက်တဲ့အတွက် များများ ပိုထည့်ပါတယ်
နောက်တခါ ပြန်ဆူပြီဆိုရင်တော့ အချို အငန်အပေါ့ မြည်းပေးပြီးတော့ အိုးဆူရင် ချလို့ရပါပြီ
ဒါကတော့ ဆူပြီးအသင့်စားသုံးရန်အသင့် ကြာဇံချက်လေးပါ
အောက်ကတော့ နံနံပင် ငရုတ်သီးမှုန့် သံပရာသီးစိပ်ကလေးတွေပေါ့
ကဲ တီ့လိုပဲ အောက်ကလို ချဉ်ချဉ် ငံငံ စပ်စပ်ကလေးထည့်စားကြနော်
Posted on November 14, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ကြာဇံ11 Comments on မွေးနေ့မှာကျွေးတဲ့ ကြာဇံချက်
Poem By Jewel
Posted on November 14, 2009 February 7, 2018 Categories jewel's ကဗျာများ, Uncategorized, Uncategorized1 Comment on မင်းရဲ့အထိအတွေ့တွေကိုလွမ်းလိုက်တာ
ကန်စွန်းဥကြိုက်တဲ့ “ကောင်လေး” သို့ လွမ်းချင်း
ဘာပုံကြီးလဲဆိုပြီးလန့်သွားကြတာလား မလန့်ပါနဲ့ ကန်စွန်းဥမီးဖုတ်ပုံပါ
ဘာလို့ဒီကန်စွန်းဥမီးဖုတ်မဲမဲကြီး ကိုတခုတ်တရ ပိုစ့်လုပ်တင်ချင်တာလဲလို့မေးရင်တော့
လူနှစ်ယောက် ကို ဒယ်ဒီကေးရှင်းပေးချင်လို့ လို့ဖြေရမှာပါပဲ
ကြာတာမှတော့တော့ ကိုကြာလို့ ဘယ်တောင်ရောက်သွားလဲမသိတော့တာပါ
ပထမတယောက်က တီ မဒီမေလို့ခေါ်တဲ့ အရင်က တီ့စာဖတ်ပရိတ်သတ် သမီးလေးပါ
မေဒီဇာ ပါ တခါက တီ့ကို ပြောဖူး(တောင်းဆိုဖူး)ပါတယ် ကန်စွန်းဥ မီးဖုတ်စားချင်တယ်တဲ့ ခုတော့ သူတောင် ဘလောခ်ပိတ်သွားတာကြာပေါ့ ဘာတွေဖြစ်လဲမသိပါဘူး ထားပါတော့
တီတခါကတော့ အချိုပွဲထဲမှာ ပါတဲ့ကန်စွန်းဥ ပြုတ်ပုံလေးတင်ပေးဖူးပါတယ်မယုံရင် တလက်စတည်း ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါ
ကန်စွန်းဥအသေကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့ (တခါက အရမ်းချစ်ဖူးတဲ့ ချစ်ဆဲ ချစ်နေမယ့်) ကမ္ဘာတခြမ်း ပင်လယ်ရပ်ခြား ဝေးတမြေက “ကောင်လေး” တယောက်ကိုလဲအရမ်းသတိရမိပြန်ပါတယ်
တလောက ဒေါ်ရီတာကလဲဘာတွေဖြစ်တယ်မသိပါဘူး လွမ်းကဗျာတွေချည်းစွတ်တင်နေတော့တာပဲ သူလဲခံစားချက်တွေ များနေတယ်ထင်သာပ အဲ့တော့ တီလဲ တိုက်ဆိုင်လာတဲ့ အခါ “ကောင်လေး” ကိုသတိရမိပါတယ် အမှန်ကတော့ နေ့တိုင်းနီးပါးသတိရနေတာပါ အမြဲတမ်းလိုလိုကတော့ သတိရနေတဲ့အဆင့်ပါပဲ တခါတခါကျတော့ လွမ်းပါတယ် တခါတခါကျတော့ တကယ့်ကိုသေလောက်အောင်လွမ်းမိတာပါ ဒါပေမယ့်လဲ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ပဲမို့လား အရင်အချိန်တွေက မိုးလင်းပေါက် ထိုင်စောင့်စကားပြောခဲ့တာတွေလဲတကယ်လွမ်းပါတယ် အချိန်က တော်တော်ကွာတယ်လေ အဲ့တော့ တီ မနက် ၃ ၄ နာရီလောက်အထိစောင့်မှ သူအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံတာပါ (တကယ်က ကောင်လေးလို့သာခေါ်နေတာပါ သူက တီ့ထက်အသက်ကြီးပါတယ် ပြီးတော့ အရမ်းလဲကလေးဆန်ပါတယ်) ဒါပေမယ့် ဘာပဲပြောပြောတီကတော့ ချစ်ပါတယ် ခုတော့လဲ မတိုက်ဆိုင်တော့ (နားလည်မှုလွဲတာပါ)စကားတောင်မပြောဖြစ်ကြတော့ပါဘူး ထားပါတော့ သတိရတာကိုပြောတာပါ။ အရမ်းလွမ်းတယ်ကွယ်
အဲ့တော့ ကောင်လေး အတွက်ကဗျာလေးတပုဒ်လဲရေးပေးချင်ပါတယ် ကဗျာ ဆိုတာ ခံစားချက်ရှိရင် ခဏလေးထွက်လာတာပါ ခံစားချက်မရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျပြန်တော့လဲ ဘယ်လောက်စဉ်းစားစဉ်းစား ဘယ်လောက်ရေးရေး အသက်မပါပါဘူး ရေးရတာလဲခက်ပြန်ပါတယ်
Posted on November 12, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာမျာ6း Comments on ကန်စွန်းဥကြိုက်တဲ့ “ကောင်လေး” ရယ်လွမ်းလိုက်တာ
ငါ့ရဲ့ ဘယ်ဘက်က နံရံတခုလား?
စဝ်ကယူရတီ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ငါ့ရဲ့ ညာဘက်က နံရံတွေလား?
ငါ့ကို ရှန်ဟိုင်းမြို့နဲ့ ဟနွိုင်းမြို့တွေကို
ငါ့အရှေ့မှာ ပိတ်နေတာ နံရံကြီးလေလား?
မတူညီတဲ့ ထူးဆန်း ပန်းပုရုပ်တုတွေ
ခုံတန်းရှည်တွေနဲ့ ပလက်ဖောင်းကျယ်ကျယ်တွေကို တော့
* (Christopher Columbus အထိမ်းအမှတ် ရုပ်တု
မက်ဟီကို မြို့တော်ကြီးရဲ့ အဓိက မီးပွိုင့်နေရာ အရင်တုံးက အထင်ကရ ရထားဘူတာရုံ နားမှာ ပြင်သစ်လူမျိုး Henri Cordier က ကိုလံဘတ်စ် အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ရုပ်ထုပါ ရုပ်တု က ရေပြင်ညီမျဉ်းအတိုင်း မြို့ထဲဘက်ကို လက်ညိုးညွှန်နေတဲ့ပုံစံပါ။ ဒီလိုမျိုး ခပ်ဆင်ဆင် မော်နူမန်တို အာကိုလွန် အထိမ်းအမှတ်ရုပ်တုတွေ အယ်လ်မေးနီးယား၊ အာဂျင်တီးနား၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ စပိန်၊ ကူးဘား၊ အမေရိက၊ အီတလီ၊ မက္ကစီကို၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဗြိတိန်၊ ဒိုမီနီကန်ရီပတ်ပလစ် စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလဲ ရှိပါတယ် ဘာ့ကြောင့် သူ့ကိုအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ထားတာလဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းပြစရာလိုမယ်မထင်တော့
ပါဘူးနော် ဒေါ်ရီတာ ပြောလို့ စာနဲနဲရှာဖတ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်နော် ဟွန့် ဗဟုသုတ မရဘူးမပြောနဲ့ အမှန်က တီ့စာတွေက ဗဟုသုတထက် “ဘူးဟုသုတ” ပိုများတာပါ အဟေးဟေး)
Posted on November 10, 2009 February 7, 2018 Categories cities thoughts, Uncategorized, Uncategorized3 Comments on မက်ဟီကို
မက်ဟီကို နဲ့ တီချမ်းရန်စခြင်း (နှာဗူးမကြီး ကြွားလုံးထုတ်ခြင်း)
ဒေလီယာ သူသူ က မာယာတွေနဲ့ ကမ္ဘာပျက်မယ့်အကြောင်းတွေရေးတော့ တီလဲအရင်တခါတင်ပြီးတဲ့ မက်ဟီကို ဆိုတဲ့ကဗျာ ပိုစ့်ကို သတိရမိပါတယ် တီကအဲ့လိုပဲ ခရီးတွေထွက်ရင်းမရောက်ဘူးတဲ့ မြို့တွေရောက်ရင် ကဗျာလေးတွေရေးလေ့ရှိပါတယ် မြို့အကြောင်းလူတွေအကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းဘာဘာညာညာ စသဖြင့်ပေါ့လေ ခုလဲ မနှစ်က သြဂတ်စ် ကသွားခဲ့တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အေစ့်ညီလာခံက ကအပြီး မက်ဟီကိုမြို့နဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင် ကိုသွားလည်ခဲ့ကြပုံတွေ နဲ့ တီရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် အင်္ဂလိပ် ဘာသာနဲ့ပါ လေးဘက်လေးတန်နံရံတွေနဲ့ မွန်းကျပ်နေမယ့် ကိုယ့်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ကြပါ
Mexico CityMonumento a’ colonBeautiful cityIs that the wall on my left???Nice feature, cute peopleI am walking on the street smoking cigarette Is that someone following me?ScaryThereaman in the streetLooking at meSpooky Is that the wall on my right???Wide roadsLots of treesWeather remind me of Shanghai…HanoiCool, cold, shiverSuddenly, it rainIs thereawall in front of me???huuuuuuuuuuuuuuuuuHigh altitude makes me difficult to breatheHotel doesn’t need air conditionTaxi and buses eitherIs thatawall behind me???Thick buildingsHistoricAncient 20 million of population four times of my cityI like the wide platforms with different sculpture and benches
everywherethen you see someone at the street cornerand greet…>>>>
Hola Buenos dias Adio’sA Chen 20th Aug 200812:48 pm
မက်ဟီကို =>>>>> ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၂၂၄၀ ရှိတဲ့ဒီမြို့လေးဟာ အပူချိန်ကျတော့ ၁၆ံစင်ဒီဂရိတ ၆၁ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ပဲရှိတာပါ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၂၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့အတွက် ကိုယ်တို့ရှူနေကျ အောက်စီဂျင် ထက် နည်းတဲ့ အောက်စီဂျင်ပဲရှိတာပါ (သူ့ရဲ့လေထုကလေ) အဲ့တာကြောင့် အသက်ရှူရတာ နည်းနည်းပိုခက်တာပေါ့ အရက်သောက်ထားရင် လွယ်လွယ်လေးနဲ့မူးတယ်တဲ့ ဦးမွန်ကိုတောင် သတိရမိသေးတော့ လူဦးရေကတော့ သန်း ၂၀ နီးပါးရှိတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က တိုကျို နဲ့ နယူးယောက်ပြီးရင် တတိယ လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးမြို့ပါ
(တီ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ ဒေါ်ရီတာ တို့လို့ အီး အဖတ်ပျင်းတဲ့သူတွေလဲပါတော့လေ၊ အမှန်က အဲ့မိန်းမ အကြောင်းပြတာပါ တခြားကမ္ဘာ ဂန္တဝင် အီးကဗျာတွေတော့ သူဖတ်ပြီးတင်နေသားပဲ တီက ကမ္ဘာမကျော်လို့နေမှာပေါ့အေနော့ ထားတော့ ထားတော့ နောင်ကမ္ဘာကျော်လာလို့ လက်မှတ်လာထိုးခိုင်းရင် ချေနေလိုက်မယ် အဲ့မိန်းမ ကိုဟွန့်) အမှန်ကတော့ ပုံတွေ ရှိသေးတယ် အများကြီးတင်ရင် အပြောခံရမှာ စိုးလို့လေ တော်ကြာ နှာဗူးမကြီးမှသည် အရှက်မရှိကောင်ကြီး ဖြစ်နေအုံးမယ် သူများမပြောခင် ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပြန်ပြောထားတာ ခုတလောက တီ့ဘလောခ် ကိုအချိန်တိုင်း နာရီမိနစ် စက္ကန့်မလပ် စောင့်ကြည့်သူတွေရှိနေတယ်လေ
(အဟေးဟေး ဘယ်သူမှမပြောခင် ကြိုပြောထားတာ အော် ပြီးတော့ တီ့ပုံတွေ ကို ခိုးမယူရဘူးနော် ခွင့်တောင်းပါ အဟိ တော်ကြာ တီ့ ကို ကြိတ်ကြိုက်နေတဲ့ ကိုကိုတုတ်ကြီး တွေ့ရင် လာခိုးယူနေမှာ စိုးလို့ ။ ဗီဒိုထဲက ထွက်ခဲ့ပါတော့ (come out off the closet) ကိုကိုတုတ်ရယ် အခြောက်တွေ မိန်းမ တွေတောင်မှ နာမည်အရင်းတွေနဲ့ကိုယ်ရေးချင်ရာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကို ရဲရဲရေးနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ တို့တွေလောက်မှ သတ္တိမရှိရင်လဲ ထမိန်သာဝတ်ထားလိုက်တော့အေ သူသူ့ ပိုစ့်မှာတွေ့တယ် ဟုတ် မိန်းမတွေ ကမ္ဘာ ကိုစိုးမိုးလာတော့မှာ အဲ့တော့ ရှင်လဲ အချိန်မကုန်ခင် မြန်မြန် လိင်ပြောင်းလိုက်တော့ (ရှင်လုပ်ချင်နေတာ သိပါတယ်အေ့) ၂၀၁၂ နော် နီးနေပြီ) (အဟေးဟေး အခြောက်တွေကို စရာတကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲ )
ကဲကဲ သူ့ရန်စနေရတာနဲ့ …………………………..
ဒီပုံက basilica de guadalupe ဘုရားကျောင်း မှာ ရှိတဲ့ သူသူပြောတဲ့ မာယာ ပြက္ခဒိန် ပါ
အဲ့ဘုရားကျောင်းက ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားလိုမျိုးပါ (ခရစ်ရှန် နဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူး) ပြောချင်တာက မက်ဟီကို လူမျိုးတွေ အကုန်က တီ့ တို့ မြန်မာတွေလိုပဲ ရွှေတိဂုံ ကို အမြို့မြို့ အနယ်နယ် ကနေ လာဖူးကြသလိုပဲ အဲ့ဒီ basilica de guadalupe ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလဲ ညအိပ်ညနေ စောင့်ပြီးတော့ ကို လာဖူးကြပါတယ် အထူးသဖြင့် ရက်ထူးရက်မြတ်တွေမှာ ဆို တကယ်ကိုပဲစောင့်အိပ်ပြီး တံခါးဖွင့်တဲ့ အထိ ကွင်းပြင်(ရင်ပြင်ထဲမှာ) ညလုံးပေါက် စောင် ခေါင်းအုံး မီးဖို ထမင်းချိုင့်စတာတွေနဲ့ မိသားစု လိုက်လာစောင့်ဖူးကြတာပါ။
ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ကောင်းကင်တော် ကဥယျာဉ်ပုံ ကိုလုပ်ထားတာ နောက်ပြီးတော့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ပုံရုပ်ထု နတ်တမန်တော်တွေ စတာတွေကို ထုလုပ်ထားတာ အများကြီးရှိပါတယ်
နောက်ပြီးတော့ လဲ black Jesus and Mary ရုပ်တုတွေလဲရှိပါတယ် ကိုယ်တွေတွေ့နေကျ ရုပ်တုတွေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်က မတူဘူးလို့ပြောပါတယ် တီ့လိုအပ်ချက်က သူသူ့လို သေသေချာချာလေ့လာရေးသားဖို့အချိန်မပေးနိုင်တာပါ နောက်များမှပေါ့နော့
ဒီပုံက pope တရားဟောခန်းမ ပါ ကိုယ်လဲဆုတောင်းခဲ့သေးတယ်
အောက်ကပုံတွေကတော့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို အမြင်ရှူထောင့်အမျိုးမျိုးက မြင်ရတဲ့ပုံတွေပါ သူက ဝန်းတခုထဲမှာပဲ ဘုရားကျောင်းတွေအများကြီး ရှိနေတာမျိုးလေ ဝန်းကြီးက အကျယ်ကြီးပဲ
ဒါက မြို့ထဲကပုံတွေပါ နောက် ပိုင်းမှာထပ်လာပါမယ် နာမည်ကြီးနေရာတွေအကြောင်း
အောက်ကတော့ ကြားဖြတ်ပြီး ပိရမစ်အကြောင်းပြောပါမယ်
ဒါကတော့ ပိရမစ် teotihuacan လို့ခေါ်ပါတယ် မက်ဟီကိုမြို့ကနေ ရထားနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကားနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် သွားလို့ရပါတယ် တီတို့ကတော့ အသွားကိုရထားစီးပြီးတော့ အပြန်ကို ဘတ်စ် စီးပါတယ် အစုံပေါ့ ရောက်သွားတော့လဲ ဘာမသိပ်မထူးပါဘူး တီကတော့ စိတ်ထဲ ကမ္ဘောဒီယား က အန်ကော်ဝတ် ကိုတောင်ပိုကြိုက်မိသေး အပေါ်တက်တော့ ကျိုက်ထီးရိုးလိုလဲခံစားချက်ပေးတယ် အမြင့်ကြောင့်ထင်တယ် မြို့ထဲထက်တော့ပိုပူတယ် ထူးဆန်းတာ က ကန္တာရ ပင်အကြီးကြီးတွေရယ် အဲ့အပင်ရဲ့ အသီးတွေကို ရောင်းနေတာပါအခွံခွာလိုက်ရင် ရဲယိုသီးနဲ့တူသလိုလို ကီဝီနဲ့လဲအရသာ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ စားလို့ကောင်းပါတယ် အရသာက ချိုချဉ်ပြုံးလေးပါ ဒီမှာကြည့်ပါ
ဒါကတော့ တီရဲ့ ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ပေါ့
ဒီပုံက ပိရမစ် ရဲ့အဝေးမြင်ပါ အမြင့်ကြီးပဲ ဒီတခုက အမြင့်ဆုံး မတက်ဘူး မောမယ်ဆိုတာ မြင်ယုံနဲ့သိလို့ သူသူပြောတဲ့ ပြက္ခဒိန်နဲ့ ဆိုင်တာ ဒဓီတခုလို့ထင်တယ် သိပ်တော့မသေချာဘူး တီဘာမှမသိပါဘူးဆိုနော့ ပြောထားတယ်လေ အစကတည်းက အာပတ်လွတ်အောင်
ဒါကတော့ ဘေးတိုက်ပိရမစ်ပုံတွေပါ အဲ့မှာလဲ ခုနက ဘုရားကျောင်းလိုပဲ ကွင်းပြင်အကျယ်ကြီးထဲမှာ ပိရမစ်တွေအများကြီး ဆောက်ထားတာ နောက်တော့ လာအုံးမယ် မြို့ထဲက ကွင်းပြင်ကြီးအကြောင်းအောက်မှာ မာယာတွေနဲ့ ကွင်းပြင်ကတခုခုတော့ တခုခုပဲ ကြည့်ရတာ နေကနေ မီးလုံးတွေကျလာရင် ပြေးစရာနေရာရှိအောင်ထင်တယ် နော့
အဲ…တီနဲနဲနိမ့်တာ တခုတော့တက်ခဲ့တယ် အောက်မှာကြည့်ပုံတွေရှိတယ်
ဒါကတော့အတက်ပါ လှေခါးကလဲအသေမတ်ပါတယ် တန်းရှိလို့တော်တော့တယ်
ဒါကတော့ အပေါ်ရောက်သွားတဲ့ပုံပါ ပြောသားပဲ ဘာမှတယ်မထူးခြားပါဘူးလို့ ကိုယ်တို့ ကျိုက်ထီးရိုးကတောင် သာသေး အရောင်ပြောပါတယ် ဝင်နေတာလေ ရွှေလူမျိုးတွေနဲ့ ရွှေရောင်ပေါ့ မဟပ်ဘူးလား?း=)
ဒါလေးတွေကတော့ အပေါ်က အရန်ရန်အထပ်ထပ် ကြားက ပုံတွေပါ
မလှမှာတော့ မပူရဘူး ကိုယ်က တာရာမင်းဝေ ရဲ့ အရှေ့မြို့ရိုးမှ မိုးရေစက်များထဲက ကခြေသည်မလေး ဂျူနိူ လိုပဲ ဘယ်လိုနေနေလှတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတော့ အဟိ
ကဲအများကြီးလဲမသိပါဘူးလို့ပြောထားပြီးသားနော် ပြီးတော့ ပုံတွေ အပ်လုတ်လုပ်နေတာနဲ့တင် အချိန်တော်တော်ကုန်သွားလို့ ရေးမယ်စဉ်းစားထားတာတွေ ခေါင်းထဲကနေ ကြက်ငှက်များကဲ့သို့ ပျောက်ကွယ်ကုန်ပေါ့ အောက်ကပုံတွေကတော့ မက်ဟီကို မြို့ထဲက ပုံတွေပါ ကဗျာထဲကရေးထားသလိုပဲ ခုံတန်းရှည်တွေ တမြို့လုံး ပလက်ဖောင်းကျယ်ကျယ်ပေါ်မှာ အများကြီးရှိပါတယ် တတိယပုံက monumento angel de la independencia ပါ မက်ဟီကန်တွေ ရဲ့ မက်ဟီကို မြို့ အဓိက အကျဆုံးနဲ့ အထင်ကရ အဖြစ်ဆုံး လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ပေါ့
လာပါပြီ ကွက်လပ်နောက်တခု Zo’calo ဇိုကိုလို လို့ခေါ်ပါတယ် သူ့အရှေ့ က လွှတ်တော် city hall ပါ အဲ့နားမှာက အလယ်ကိုကွက်လပ်လုပ်ထားပြီးတော့ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦတွေနဲ့ဝန်းရံထားတာပါ သူသူတို့ဒေါ်ရီတာ တို့လို အာခီတွေ အင်…ဂျင်နီယာတွေဆိုရင်တော့ တော်တော်လေ့လာလို့ကောင်းမယ် မြို့ပါ ကိုယ်လို နလပိန်းတုံးအတွက်ကတော့ အင်း…………………မက်ဟီကို ကကောင်လေးတွေက ချောတယ်ကွယ် ခက်တာက ဝ နေကြတာပဲ မျက်လုံးမျက်ခုံးလေးတွေကလှကလှနဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကလုံးနေတာခက်တယ် ကိုယ်က ဝတာမကြိုက်….း=(
အဲ့ဒီကွက်လပ်က ရုရှားက ကွက်လပ်ပြီးရင် ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးလို့ပြောပါတယ် ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်းပဲနော်
ဒီပုံတွေက အနားမှာရှိတဲ့ Majestic Hotel ရဲ့ ၇ ထပ်ကကော်ဖီဆိုင်ကနေ panoramic view ရိုက်ထားတာပါ။
ဒါကတော့ မြို့လယ်ကွက်လပ်က ဘုရားကျောင်းပါ အနောက်နိုင်ငံတွေကလဲ သူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့တော့ တော်တော်လေးကို ယုံကြည်သက်ဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ် ဖရီးသင်ကာတွေများတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ ရီလေးဂျီးယပ်စ် တွေလဲများတော့မျှနေပုံရပါတယ် ဒီဘုရားကျောင်းက နှစ် ၅၀၀ ကျော်ပြီလို့ပြောပါတယ် အမိုးပေါ်အထိတက်လို့ရပါတယ် ပြင်နေတာတွေလဲတွေ့ရပါတယ် ထိန်းသိမ်းထားတဲ့သဘောထင်ပါတယ် အဟောင်းတွေကိုဖျက်ပြီး ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ထဲတော့တမျိုးပဲ အင်းလေ ဒါကလဲ သမိုင်း ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့လူတွေပိုသိမှာပါ အောက်က အလံနောက်က အဆောက်အဦ ကခုနကပြောတဲ့ လွှတ်တော်ပါ မိုက်တယ်နော်
ဂျက်ကီချန်းကိုတောင်ကွက်လပ်ထဲလျောက်ပြေးပြီးနောက်ကနေ ရုရှားသေနတ် သမားတွေက လိုက်သတ်နေပုံမျက်လုံးထဲမြင်ယောင်လာသလိုပဲ
ဒါကတော့ တီမြို့ထဲမှာ လျောက်သွားရင်းရိုက်ထားတာတွေပါ
တီချမ်း ဟင်းပဲချက်တာကောင်ပါတယ်နော် လျောက်လုပ်နေတယ်
10th November 1981
Posted on November 9, 2009 February 7, 2018 Categories cities thoughts, Uncategorized, Uncategorized10 Comments on မက်ဟီကို နဲ့ တီချမ်းရန်စခြင်း (နှာဗူးမကြီး ကြွားလုံးထုတ်ခြင်း)
မှန်တွေက ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်မြင်စေတယ်
နံရံတွေ က လူတွေပြောတာ ကို ပဲ့တင်ထပ်ပေးတယ်
ငါ့မှာ ငါကြားတာတွေ ကိုပြန်ပြောပြစ်လိုက်ဖို့
လိုတိုးပိုလျော့ လုပ်ပေးဖို့ ဦးနှောက် တစုံလဲရှိသေးတယ်
မိညီမ ၏ ကျမနှင့် ကျမ၏အခြားတစ်ဖက်
ကိုဖတ်၍ ဤကဗျာ ကိုရေးဖြစ်သည်။)
Posted on November 8, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ7 Comments on လူ၊ မှန်၊ နံရံ၊ ပါးစပ် နဲ့ နားများ